Global Voices teny Malagasy » Ny zon’ny vehivavy any Pakistana · Global Voices teny Malagasy » Print
Ny zon'ny vehivavy any Pakistana
Voadika ny 14 Mey 2018 3:14 GMT 1	 · Mpanoratra Ambreen Salman Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fampandrosoana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
(Tamin'ny 8 Aprily 2010 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Mbola mila ezaka maro mba hitovizany amin'ireo firenena mandroso i Pakistana amin'ny maha-firenena an-dàlam-pandrosoana azy. Mihoatra ny antsasaky ny mponina ao amin'ny firenena ny isan'ny vehivavy, saingy indrisy fa tsy mba manan-jo izy ireo. Ny 8 Martsa tamin'ity taona ity (2010) , nankalaza  ny “andron'ny vehivavy” ihany koa i Pakistana tao anatin'ny fiezahana mba hanova ny fiainan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny fanehoana ny taratry ny fanantenana ho an'ny vehivavy tsirairay. Iray amin'ireo zava-misy henjana atrehan'ny vehivavy Pakistaney ny herisetra an-tokantrano . Nilaza ireo mpikatroka mitolona hiarovana ny vehivavy fa vehivavy maro no mbola miaina ao anatin'ny herisetra satria mihevitra izy ireo fa tsy maintsy mankatò ny vadiny ary mahamenatra ny fisaraham-panambadiana.
Ny fiaretan-tory niaraka tamin'ny labozia nandritra ny fanentanana ribao (fehilamba) fotsy tao Umerkot, Pakistana. Sary avy amin'ny mpisera Flickr CWGL. CC BY
Araka ny tatitra nataon'ny ONG White Ribbon Campaign  (WRC na fanentanana fehilamba fotsy), iharan'ny fampijaliana tsy mitsaha-mitombo ny vehivavy Pakistaney . Notaterina isan-taona ny fitomboan'ny trangan-kerisetra any Pakistana. Araka ny tatitra, “anisan'ny endriky ny herisetra atao amin'ny vehivavy ny hersisetra ara-nofo eny amin'ny toeram-piasana, ny fanararaotana, ny famonoana ary ny fanolanana .”
Tsy nianatra ny iray ampahatelon'ny vehivavy any Pakistana ary tsy manan-kevitra loatra ny amin'ny safidiny manokana. Matetika ny polisy no tsy miraharaha ny vehivavy ary mandà tsy handray ny raharaha raha tsy misy ny porofo hita maso amin'ny ratra ary toa miandany amin'ireo lehilahy vadiny ihany koa ny mpitsara amin'izany fotoana izany.
Nanambara  i Dr. Farzana Bari, lehiben'ny Foibe ho an'ny Fanabeazana momba ny lahy sy ny vavy ao amin'ny Oniversiten'i Quaid-e-Azam, fa toa fahadisoan-kevitra ihany ny fankalazana ny andron'ny vehivavy amin'ny lohahevitry ny Firenena Mikambana hoe “Ny fitovian-jo, ny fahafahana mitovy: ny fandrosoana ho an'ny rehetra” ” rehefa tsy misy ny zo sy ny fahafahana eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay; ny lehilahy, ny vehivavy ary ny ankizy.”
Are we then asking for equality in police torture recently shown on television channels? Equality in sharing the brutality of the factory-owner, who kidnapped, chained and tortured a laborer in Gujranwala? Do we want to share the humiliation of bus hostess in Sialkot? Do we want to have equality in the fate of Shazia, the young domestic servant who was tortured to death?
Moa ve isika mangataka ny fitovian-jo eo amin'ny fampijaliana ataon'ny polisy vao haingana hita tao amin'ny fahitalavitra? Ny fitovian-jo amin'ny fizarana ny herisetran'ny tompon'ny orinasa, izay naka an-keriny, namatotra ary nampijaly ny mpiasa iray tao Gujranwala? Tiantsika ve ny mizara ny fanalam-baraka natao tamin'ireo tovovavy mpandray vahiny tao anaty bisy tao Sialkot ? Moa ve isika maniry ny hitovy eo anatrehan'ny tranga nahazo an'i Shazia, ilay tanora mpiasa an-trano iray izay nampijaliana ho faty?
Nilaza  ilay mpanoratra ato amin'ny Global Voices, Sana Saleem ao amin'ny bilaogy Dawn hoe:
For a society to progress, human rights have to be guaranteed, with the assurance that rights are maintained without gender bias or discrimination. Gender-based violence reflects and reinforces injustices and compromises the health, dignity, and liberty of its victims.
Raha te handroso ny fiarahamonina iray dia tsy maintsy azo antoka ny zon'olombelona, ​​miaraka amin'ny fanomezan-toky fa hajaina hatrany ny zon'olombelona izay tsy ahitana ny fanavakavahana ny lahy sy ny vavy. Maneho sy manamafy ny tsy rariny ny herisetra mifototra amin'ny fanavakavahana ny lahy sy ny vavy ary tandindonin-doza noho izany ny fahasalamana, ny fahamendrehana ary ny fahafahan'ilay niharan'izany .
Tany Pakistana, niady hevitra momba ny volavolan-dalàna iray mikasika ny fandraràna herisetra an-tokantrano  ny parlemanta. Nanaraka izany akaiky Ireo mpikatroka ny zon'ny vehivavy sy ny mpanao lalàna Islamista. Mbola tsy fantatra tamin'izay fotoana izay izay handresy. Nanontany ny fahombiazan'ny fitsarana  ilay bilaogera Pakistaney Baaghi satria tsy misy lalàna matanjaka hiarovana ireo vehivavy:
At the end of the day, dispensation of justice begins from acknowledging an act as crime. If domestic violence is not even considered a punishable crime, how can one expect to get redress from the system? When acid throwing is not listed in the penal code as a form of offence, how one can even hope for it to be punishable? And when even some of these crimes against humanity are listed as crimes, our rotten system just refuses to acknowledge that it ever happened.
Ny hariva, nanomboka tamin'ny fankatoavana ny raharaha ho toy ny heloka bevava ny fotoam-pitsarana. Raha tsy heverina akory ho toy ny heloka bevava ny herisetra ao an-tokantrano, ahoana no fomba ahafahana manitsy ny rafitra? Raha toa ka tsy ao anatin'ny fehezan-dalàna famaizana ho toy ny endrika fandikan-dalàna ny fandrarahana asidra, ahoana no fomba ahafahan'ny olona manantena fa ho saziana izany? Ary na dia voatanisa ho heloka bevava aza ny sasantsasany amin'ireny heloka bevava mamely ny maha-olona ireny, dia tsy miaiky ny rafi-pitsarana maloto eto amintsika fa efa nisy izany.
Afaka manatanteraka ny tanjon'izy ireo amin'ny alalan'ny fiaraha-mientana sy ny fifankaherezana ny vehivavy Pakistaney. Dingana iray manan-danja amin'ny fanatsarana ny toe-javatra misy ny fampianarana ireo vehivavy izay hanampy amin'ny fisarihana ny saina momba ny zava-mitranga atao amin'ny vehivavy manerana izao tontolo izao ankehitriny. Toa mahagaga ihany raha hoe tsy maintsy terena hanao zavatra ny vehivavy amin'ny maha-vehivavy azy ireo. Tsy misy afaka manova izao tontolo izao amin'ny herin'ny tenany manokana, saingy ny ezaky ny olona tsirairay no ahafahana manova tanteraka ny fiarahamonina. Tokony hahalala ireo firenena izay mbola manaiky ny fanararaotana ny vehivavy fa haraha-maso izy ireo. Maro ireo governemanta no tarihan'ny lehilahy ary mety tsy manana finiavana hanova ny zava-misy raha tsy mihetsika izao tontolo izao.
Ireto ny zavatra azontsika atao eo amin'ny sehatra misy antsika :
Afaka mampianatra ny tenantsika isika.
Afaka manampy ny fikambanana izay mampiroborobo ny zon'ny vehivavy isika.
Afaka miara-miasa isika ary mampahafantatra ny governemantantsika fa mahatsapa ny zava-mitranga manerantany ary tsy hamela izany hitranga.
Afaka manoratra any amin'ny masoivoho vahiny mikasika ny herisetra isika mba hahafahan'izy ireo manampy amin'ny fampiroboroboana ny fanairana.
Afaka mampitombo ny fampahatsiarovan-tena isika.
Afaka mamaky tantara momba izany isika.
Afaka manoratra momba izany isika.
Afaka mamahana bilaogy momba izany isika.
Afaka miresaka momba izany isika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/14/119294/
 White Ribbon Campaign: http://www.whiteribbon.org.pk
 iharan'ny fampijaliana tsy mitsaha-mitombo ny : http://www.twocircles.net/2007sep13/pakistani_women_face_increasing_abuse_report.html
 volavolan-dalàna iray mikasika ny fandraràna herisetra an-tokantrano: http://alisonclarke.typepad.com/womens_news/2010/04/pakistan-domestic-violence-ban.html
 Nanontany ny fahombiazan'ny fitsarana: http://marvisirmed.com/?p=238